लकडाउनमा समय बिताउने स्वस्थकर एवं सिर्जनशील उपाय
अहिले सार्स कोरोेना भाइरस २ (कोभिड १९) को विश्वव्यापी महामारीको कारणले गर्दा नेपाल लगायत धेरेै देश र शहरहरु लकडाउनमा छन् । यसले गर्दा धेरै बिरामीहरु स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न सकिरहेका छैनन् र पुगिहाले पनि राम्रो उपचार सेवा पाउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले बिरामी हुनबाट बच्नु धेरै महत्वपूर्ण छ । यो लेखमा अहिलेको दैनिकीलाई कसरी स्वस्थकर, सिर्जनशील, उत्पादनमूलक र मनोरञ्जनात्मक बनाएर रोग लाग्नबाट बच्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा चर्चा गरिनेछ ।
बिहान घाम झुल्किनुभन्दा ४५ मिनेट अगाडि नै उठांै । आजकल करिब ५ः४५ मा घाम झुल्किने हुनाले ५ बजेतिर नै उठ्नु उपयुक्त हुन्छ । आयुर्वेदमा यसलाई ब्रह्ममुहुर्तमा जागरण भनिन्छ । उचित मात्रामा निद्रा स्वास्थ्यको लागि अत्यावस्यक छ । सामान्य मानिसको लागि छ देखि आठ घण्टाको गहिरो निद्रा आवस्यक हुन्छ । राति ढिलोसम्म बस्नु र बिहान ढिलोसम्म सुत्नु स्वास्थ्यको दृष्टिले अत्यन्तै हानिकारक छ । खास गरेर किशोर किशोरीहरु र भरखरका युवायुवातिहरुमा यस्तो आदत बढी पाईन्छ । त्यसैले अविभावकहरुले विशेष ध्यान दिन र सम्झाउन जरुरी हुन्छ । बिहान चाँडै उठ्नकोे लागि सुत्ने बेलामा नै चाडै उठ्ने दृढ संकल्प लिएर सुत्नुपर्छ ।
उठेपछि मुख कुल्ला गरी दुई गिलास पानी पिएर दिशा पिसावको लागि ट्वाइलेट जाआंै । उठ्नेबित्तिकै दिशा गर्ने बानी छैन भने बल गरेर गर्ने प्रयत्न नगरौं । तर दैनिक रुपमा बिहानै दिशा हुनु राम्रो हुन्छ । दिशापिसाव गरेपछि साबुन पानीले हात धुनुपर्छ । मुख धुँदा नाक र आँखा राम्ररी सफा गरांै । दाँत माझिसकेपछि जिब्रोको पछाडिको भागमा जम्मा भएको तह जिब्रीले विस्तारै सफा गरौं । जोडले गर्दा जिब्रोमा भएका ‘टेस्ट बड’ मा क्षति पुग्न सक्छ ।
घरमै बसेर कुनै शाीरिक श्रम एवं बौद्धिक काम नगरिरहेको अहिलेको समयमा व्यायामको सख्त जरुरत पर्छ । शारीरिक एवं मानसिक रुपमा स्वस्थ रहनको लागि सर्वोत्तम व्यायाम योगासन हो । सूर्य नमस्कार छोटो समयमा गर्न सकिने पूर्ण व्यायाम हो । जसले सिक्नुभएको छ तर नियमित अभ्यास गर्नुभएको छैन वहाँहरुले नियमित अभ्यास गर्ने र जसले सिक्नुभएको छैन वहाँहरुले टि. भी. हेरेर वा युट्युब हेरेर भए पनि सूर्य नमस्कार, आसन प्राणायाम एवं ध्यान सिक्ने उपयुक्त अवसर हो । आसनहरुले मूलरुपमा शारीरिक व्यायामको काम गर्र्छ, प्राणायामले मनलाई नियन्त्रणमा राख्न मद्दत गर्छ र ध्यानले आध्यात्मिक उन्नति गराउँछ । यसबाहेक नाँच मनोरञ्जनात्मक हुनुको साथै व्यायामको उत्तम विधि पनि हो । खास गरेर बच्चाहरुसँग नाँच्यौ भने उनीहरुको पनि व्यायाम हुनुको साथैे समय पनि सिर्जनात्मक ढंगले बित्छ । डोरी नाघ्ने खेल (स्किपिङ्ग) घरमै गर्न सकिने अर्को व्यायामको विधि हुनसक्छ । सम्भव भएमा व्याडमिण्टन एवं टेवलटेनिस खेल्न सकिन्छ । घर वरपर नै ‘मर्निङ वक’ गर्न वा साइकल चलाउन पनि सकिन्छ ।
दैनिक मालिस (मसाज) गर्नु अर्को स्वस्थकर बानी हो । यसको लागि मसाज थेरापिष्टकै आवस्यकता पर्दैन । आफैंले वा परिवारको सदस्यको सहायताले गर्न सकिन्छ । घरमै उपलब्ध तोरीको वा तिलको तेल अथवा आयुर्वेद औषधि पसलमा उपलब्ध मालिस तेलहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ । सम्पूर्ण शरीरमा मालिस गर्न सम्भव नभए पनि टाउको, कान तथा पैतालामा नियमित रुपमा मालिस गर्नु राम्रो हुन्छ ।
घरमै बसेर कुनै शाीरिक श्रम एवं बौद्धिक काम नगरिरहेको अहिलेको समयमा कम क्यालोरीको खाना खाँदा पनि पुग्छ । त्यसैले सामान्य अवस्थामा भन्दा कम खाना खानुपर्छ । दिनमा तीन पटक भन्दा बढी नखाऔं । हाम्रो आमाशयलाई चार भागमा विभाजन गर्ने हो भने दुई भाग भात, रोटि आदि ठोस खाना, एक भाग दाल, तरकारीको रस आदि तरल पदार्थ र एक भाग खाली राख्नु उपयुक्त हुन्छ । अर्थात पेटभरी टन्न खाना खान हँुदैन । पेटभरी खाँदा शरीर कुपोषित हुन्छ । याद रहोस शरीरलाई पर्याप्त पोषक तत्व नपुगेको अवस्थालाई मात्र कुपोषण भनिंदैन, आवस्यकताभन्दा बढी खाएर रोग लाग्ने अवस्थालाई पनि कुपोषण नै भनिन्छ ।
तेल एवं घिउमा तारेका–भुटेका, धेरै नुन, मसाला एवं खुर्र्सानी हालेका खाना पनि सकेसम्म नखाऔं । दुखाई कम गर्ने औषधिहरु पनि अत्यावस्यक अवस्थामा बाहेक प्रयोग नगरौं । मद्यपान एवं धूम्रपान गर्दै नगरौं । यी कुराहरु पालना गर्न सकिएमा तीब्र आमाशयकला शोथ (एक्यूट ग्यास्ट्राइटिस) जस्ता समस्याबाट बच्न सकिन्छ र ‘इमर्जेन्सी’ रुपमा अस्पताल जानुपर्ने अवस्था आउनबाट जोगिन मद्दत पुग्छ ।
कोरोना भाइरस को बारेमा भ्रामक समाचार र अफवाहको कारणले अनावस्यक डर एवं चिन्ता उत्पन्न भएर शारीरिक एवं मानसिक रोगको औषधि खाईरहेका व्यक्तिहरुमा रोग बढ्न सक्ने हुनाले उनीहरुलाई समय दिएर कुराकानी गर्ने, यससंबन्धि वास्तविक जानकारी गराउने र सकारात्मक कुराहरु पढ्न, हेर्न वा सुन्न उत्प्रेरित गर्ने गर्नाले सम्भावित जटिलताहरुबाट बच्न सकिन्छ । यसको साथै बच्चाहरु खेल्नेक्रममा चोटपटक लाग्ने वा दुर्घटनामा पर्नसक्ने हुनाले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।
पुस्तक पढ्ने (पाठ्यक्रमको वा पाठ्यक्रम बाहिरको जीवनी, कथा, कविता, उपन्यास आदि), अनुसन्धात्मक जर्नलहरु पढ्ने, साहित्य एवं लेख लेख्ने, आसन, प्राणायाम एवं ध्यान गर्ने, पेण्टिङ गर्ने, नाच्ने, गीत गाउने एवं संगीत सुन्ने, आफ्नो बिषयसम्बन्धि भिडियो बनाएर युट्युबमा राख्ने, कोठाको सरसफाई गर्ने एवं कोठा ‘रिएरान्ज’ गर्ने, खेतबारीको काम गर्ने, गार्डेनिङ गर्ने, फोन, मेसेञ्जर, भाइबर आदि माध्यमबाट पुराना पारिवारिक एवं सामाजिक संबन्धहरु पुनःस्थापित गर्ने, नयाँ परिकार बनाउन सिक्ने, घरको काममा परिवारका सदस्यलाई मद्दत गर्ने, समस्यामा परेका व्यक्तिहरुलाई मद्दत गर्न स्वयंसेवीको काम गर्ने, चेस, क्यारेम, लुँडो आदि घरभित्रै खेल्न सकिने खेल खेल्ने, फिल्म एवं टि.भी. सो हेर्ने, विगतका कुराहरुबाट सिक्दै भविष्यको योजना बनाउने, गुगल वा युट्युब हेरेर आफ्नो ‘करीयर’को लागि उपयोगी, पे्ररणादायी एवं नयाँ कुराहरु सिक्ने, दैनिकी लेख्ने आदि ।
प्रकासित मिति २०७७–१–६